Beauty The Of Bernina Express | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Switzerland > Beauty The Of Bernina Express
Bernina Express is one of the most beautiful sodcaalladoodii oo tareen dunida oo dhan. First of dhan, on the Rauma Line ka Dombas in Andalsnes (Norway), aad ku raaxaysan karaan aragtida ah danbow sare. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ka arki kartaa laylan ee buurta iyo plateaus sida aad u gudbin Rauma River. Intaa waxaa dheer, you can also see Europes highest rock face Trollveggen and the gorgeous buundada digaag.
image cajiib ah Cinque Terre Italy.
on the Cinque Terre dhexeeya Levanto iyo La Spezia (Italy), aad u gudbin by tuulooyinka sawir-kaamil ah, beerihiinna saytuunka ah, canab ah, and the unforgettable turquoise Ligurian Badda. The Central Rhine Railway dhexeeya Bingen iyo Koblenz (Germany) waa sida wax ka mid ah ekayd leh Daar wayn ee qadiimiga ah biyaha korkooda.
Waxaa laga yaabaa in ugu quruxda badan iyo faraxgelinta muuqaal dabiici ah kortaan tareenka ee Europe waa Bernina Express. Of all the muuqaal dabiici ah Swiss raacid tareenka, Bernina waa ugu quruxda badan. tareen Tani dalabyo kortaan views dusha ka CHUR & St Moritz ee Switzerland bariga koonfureed ee Tirano ee waqooyiga Italy. Tani tareen kortaan qaadataa qiyaastii 4 saacadood sidii aad daboosho 90 miles oo ka mid ah barafka ee Switzerland qorraxda ee Italy. safarka Tani waxaa weeyaan 55 sugnan iyo in ka badan 196 buundooyinka. tareenka waxa uu ahaa in ka badan yahay 120 sano jir iyo waa UNESCO site dhaxal ahaan dunida. Bernina Express ayaa qaybsada line a la sitoos Express iyo daboolayaa dhammaan Landwasser Viaduct. Close si Pontresina, tareenka u kori, in Pass Bernina ah, markaas Morteratsch sitoos. Tareenka dhibic ugu sareeya waa at hospice Bernina kaas oo ku fadhiya ka badan 7000 cagaha kor ku heerka badda.
Dhinaca kale buurta this, tareenka ag maraaba tacsida geedaha ka hor istaageysaa tuulada picturesque ee Poschiavo. tareenka ayaa markaas soo baxa dhinaca Tacaddi ah Brusio muquuninta Viaduct. Ku dhowaad dhammaan photos on safarka waxaa dhacaan.
Cologne si Tareenadu Koblenz
Essen in Tareenadu Koblenz
Trier in Tareenadu Koblenz
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah macluumaadka muhiimka ah haddii aad ka fekereyso qaadashada tareen Bernina Express;
Haddii aad tahay safarka ee xilliga qaboobaha, wadada waqooyi ee inta badan safaradiisa marka waa madow, si aad u seegi doona wax badan oo ka mid ah muuqaal qurux badan.
Intaa waxaa dheer, fasalka labaad waa mid aad u wanaagsan on tareen this dhammaan adeegyada la mid ah sida heerka koowaad, sidaa darteed looma baahna in ay bixiyaan lacag dheeraad ah haddii aad wax yar ka rabto yar buuxo fadhiga.
on the tareenka ee koonfurta, aad rabto in aad la fadhida dhinaca midig ee tareenka ee. Tan iyo markii ay Switzerland muuqaal waxaa laga daawan karaa ka dhinacan. iyo tareen waqooyi ah, aad rabto in aad dhinaca bidix ee gacanta ku fadhiisan.
The daaqadaha dusha weyn ha furin. Waxaa jira furan yar ee soo socda in ay albaabada tareenka. Waxaad photos aad iyaga ka soo qaadan kartaa (aan halkaas isagoo muujisa).
Ma waxaad qorsheyneysa safar on Bernina Express? Waa maxay sababta aan qaadan 3 daqiiqo iyo ka heli tigidhada tareenka ka jaban on www.saveatrain.com . Buuxi taariikhda iyo waqtiga in aad jeclaan lahayd in ay u safraan, oo waxaan ku siin doonaa qiimaha ugu wanaagsan ee safarka, in la bixin karaa siyaabo kala duwan oo ay ku jiraan Paypal iyo Seeraar.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-bernina-express/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#bernina #berninaexpress tareen safarka travelswitzerland
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, safarka Europe, Yoga in Europe